အခမဲ့ Forex ကွက် - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာအခမဲ့ Forex ကွက်
အခမဲ့ BF စမတ် Scalper EA ၏ဒီ BF စမတ် Scalper ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးတစ်ဦးအပြည့်အဝအလိုအလျောက်အခမဲ့ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးပါရမီသောအရာတို့ကိုလှပသောရိုးရှင်းသောဖြစ်ကြသည်။ BF စမတ် Scalper EA ၏အလွန်ရိုးရှင်းပြီးပေမယ့်အပေါ်အခြေခံသည် [ ... ]
အခမဲ့ Pender EA ၏
အခမဲ့ Pender EA ၏ဒီ Pender ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးတစ်ဦးအပြည့်အဝအလိုအလျောက်အခမဲ့ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထရေးဒင်းစျေးနှုန်းမကြာသေးမီကအချိန်ကာလအတွင်းမှာနှေးကွေးခဲ့ဘယ်မှာအရေးကြီးသောစျေးနှုန်းအဆင့်ဆင့်အပေါ်ဆိုင်းငံ့အမိန့်ကိုအသုံးပြုပြီးဖျော်ဖြေနေသည်။ အဆိုပါ [ ... ]
အခမဲ့အဝါရောင် EA ၏သတ်မှတ်ချက်အတွက်သတ်မှတ်စျေးနှုန်း "စင်္ကြံ" ကိုလမ်းကြောင်းသစ်အတွက်ရေတိုရေရှည်အပြောင်းအလဲများအပေါ်အခြေခံပြီးအဝါရောင် Multicurrency ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးအလုပ်လုပ်တယ်၏အခမဲ့ဗားရှင်း။ ထရေးဒင်း၏ပြင်ပနယ်နိမိတ်မှာထွက်ယူသွားတတ်၏ [ ... ]
အခမဲ့ SZ Scalper EA ၏အဆိုပါ SZ Scalper ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးများ၏အခမဲ့ဗားရှင်း။ ကိုယ်ကသာဝယ်ပါရာထူးဖွင့်လှစ်။ အဆိုပါ EA ၏ထောက်ခံမှုနှင့်ခုခံရေးအဆင့်ဆင့်ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ အများအပြားကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများထည့်သွင်းထားပါသည်။ ဤသည်ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးကုန်သွယ်များအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည် [ ... ]
အခမဲ့ Vino EA ၏ဤသည်ကို EA Vino EA ၏တစ်ဦးအခမဲ့ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အဝဗားရှင်းမတူဘဲသတ်မှတ်ချက်မပြောင်းနိုင်နှင့်စာရေးတံအရွယ်အစား 0.01 ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။ Vino အခမဲ့ EA ၏ - ဖျေါပွခကျြ Vino EA ၏ [ ... ]
အခမဲ့ Ilanis EA ၏ဤ Ilanis EA ၏များ၏အခမဲ့ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Forex စက်ရုပ်သာအရောင်းအဝယ်ခြင်းဖွင့်လှစ်။ ဤအပြည့်အဝကို EA ၏အော်ပရေတာအကဲဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှု၏စနစ်များနှင့် [ ... ]
အခမဲ့စစ်မှန်သော Scalper EA ၏အဆိုပါထုတ်ကုန်တဲ့ Expert အကြံပေးအမည်တူရှိခြင်း၏အခမဲ့ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အဝဗားရှင်းမတူဘဲလက်ရှိတဦးတည်းနိမ့်ဆုံး volumes ကိုသာတစ်ဦး fixed တွေအများကြီးကုန်သွယ်မှု။ အဆိုပါ EA ၏ထူးခြားသောသက်ဆိုင် [ ... ]
အခမဲ့ Helios EA ၏ Helios စျေးနှုန်းအချက်အလက်များ၏စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသည်။ အဘယ်ကြောင့် Helios EA ၏? အဘယ်သူမျှမအန္တရာယ်များကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများ။4နှင့် 5-ဂဏန်းကိုးကားနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အကွိမျမြားစှာအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု profile များကို။ အဘယ်သူမျှမရုတ်တရက်သိုက် [ ... ]
အခမဲ့ DSProFx ဦးရေပြားကို EA
အခမဲ့ DSProFx ဦးရေပြားကို EA DSProFx ဦးရေပြားကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးဦးရေပြားကုန်သွယ်မှုများအတွက်တစ်ဦးအပြည့်အဝ automated Forex စက်ရုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြအချို့ညွှန်းကိန်းအပေါ်အခြေခံထားတယ်: ပျမ်းမျှအား, Stochastic လှို, MACD နှင့်ဖယောင်းတိုင်အသံအတိုးအကျယ်နှင့်ပုံစံ Moving [ ... ]
အခမဲ့ Escape EA ၏ Lite ကိုဒါဟာ 0.03 ဟုသတ်မှတ်အများကြီးကန့်သတ်နှင့်အတူ Escape ကို EA ၏အခမဲ့ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုန်သွယ်မှုစနစ်တစ်ပြောင်းလဲနေသောစျေးနှုန်းအကွာအဝေး၏ breakout အပေါ်အခြေခံသည်။ input parameters တွေကိုသင်ကခွင့်ပြု [ ... ]
အခမဲ့ Wolfgrid EA ၏ဒီ Wolfgrid EA ၏တစ်ဦးအခမဲ့ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အဝဗားရှင်းမတူဘဲအချို့လုပ်ဆောင်ချက်များကိုမသန်စွမ်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် parameters တွေကိုပြောင်းလဲပစ်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ လောတအရွယ်အစား 0.01 ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။ အခမဲ့ Wolfgrid EA ၏ - ဖျေါပွခကျြ [ ... ]
မှတ်ချက်: ဒီအခမဲ့ Forex EA ၏မရှိတော့အများပြည်သူရရှိနိုင်ပါသည်ပါ! အခမဲ့ယောင် EA ၏ယောင်အခမဲ့ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးထိုကဲ့သို့သော Bbands, RSI, ADX အဖြစ်စံညွှန်းကိန်းအသုံးပြုတဲ့လမ်းကြောင်းသစ် scalper ဖြစ်ပြီး, Moving [ ... ]
အခမဲ့ကို Safe စက်ရုပ်ဒါကအလွန်အမြတ်အစွန်းနှင့်ကို Safe စက်ရုပ်တစ်ဦးအခမဲ့ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ အခမဲ့ကို Safe စက်ရုပ် - ဖျေါပွခကျြကိုဘယ်လိုဒီကို EA တစ်ဦးအနေအထားဖွင့်လှစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရသနည်း ဘေးကင်းလုံခြုံစက်ရုပ်စစ်ဆေးမှုများနှစ်ခုအချက်ပြမှုများ, ပထမဦးဆုံးအချက်ပြမှု [ ... ]
Python ကို EA ၏ Python ကို EA ၏ညဉ့်အချိန်နာရီ (20 မှ 00: EET များအတွက် 08 00 ထံမှ) ကာလအတွင်းစျေးနှုန်းအတက်အကျ၏သဘောသဘာဝသို့ပြန်သွားခြင်းယုတ်အပေါ်အခြေခံသည်။ အဆိုပါ backtest 2005 ထံမှကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Python ကို EA ၏ [ ... ]
Saad Scalper EA ၏ Saad Scalper EA ၏တစ်ဦးအပြည့်အဝ automated Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသည်နှင့်အမြတ်အစွန်းအရောင်းအထဲကအများစုဟာအောင်က၎င်း၏ထူးခြားသောစတိုင်နှင့်အတူတစ်ချိန်တည်းမှာနှစ်ခုမဟာဗျူဟာကိုင်တွယ်။ ဤသည် Forex EA ၏ pips scalps [ ... ]
Digger ကို EA Digger ကို EA နေ့နှင့်မြင့်မားမတည်ငြိမ်သောကာလအတွင်းအထူးသဖြင့်ဦးတည်ရွှေ့ဖို့စျေးနှုန်းစွမ်းရည်အပေါ်အခြေခံသည်။ အဆိုပါ backtest 2009 ထံမှကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးရာထူးကိုတွက်ချက် [ ... ]
grid စပါးရိတ်ရာကာလကို EA ဤ grid စပါးရိတ်ရာကာလကို EA ၏အခမဲ့ဗားရှင်းပါ! အပြည့်အဝဗားရှင်းတူညီမဟာဗျူဟာ, တစ်ခုတည်းသောန့်အသတ်ရာထူးများ၏အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ရည်မှန်းချက်ထဲကအများဆုံးရိတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် [ ... ]
Fibonacci EA ၏ Fibonacci EA ၏ပြုပြင်ထားသော Fibonacci မဟာဗျူဟာအပေါ်အခြေခံသည်။ ဒါဟာအားလုံးအချိန်ပြကွက်အပေါ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သငျသညျ H1 ပေါ်မှာတွဲလျှင်: အဆိုပါ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးဥပမာအနေအထား (ဖွင့်လှစ်ရန်နှစ်ရက်အကြာမှအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည် [ ... ]